Musi waChikunguru 1, Apple Store yekutanga ichavhurwa muTaiwan | IPhone nhau
Vakomana vanobva kuCupertino vanoenderera mberi nekuwedzera huwandu hweApple Stores kutenderera pasirese. Yekupedzisira iyo Apple inoronga kuvhura mumazuva mashoma anotevera ndiyo iri muTaiwan, ichiva chekutanga chitoro cheApple munyika, nyika uko Apple Pay yave ichiwanikwa kwemwedzi mishoma ikozvino uye vashandisi vava kukwanisa kubhadhara nefoni yavo bhiri yekutenga kwese kwavanoita kuburikidza neTunes, Apple Music mimhanzi yekunyorera masevhisi, uye nezvimwe. Ichi chitoro cheApple chichavhura madhoo ayo musi waChikunguru 1 na11 mangwanani nguva dzemuno uye pachaitirwa zviitiko zvakasiyana kupemberera kuvhurwa
Ichi chitoro cheApple chekutanga munyika chichava panzvimbo yepasi peTaipei 101 shopping centre, mudunhu reXinyi, imwe yeakakosha kwazvo muguta. Chitoro ichi ichapa ese masevhisi uye mashopu aripo parizvino muApple Stores iyo iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakapararira kutenderera pasirese. Kufanana nekuvhura kwakapfuura, Apple yakahaya maartist emuno kushongedza kwete chete mukati mechitoro, asiwo kushongedza kunze kwechitoro kusvika zuva rekuvhura. Pane ino chiitiko, Yang-Shih-Yi anga achitarisira kugadzira mapaneru ayo parizvino ari muApple Chitoro.
Kana Apple ichivhura iyi nyowani Chitoro cheApple muna Chikunguru 1, vakomana vanobva kuCupertino ivo vanozove ne496 chaiwo Apple Stores akapararira pasi rese, kunyanya munyika gumi nenomwe. Zviripachena kuti United States ndiyo nyika ine zvitoro zvakawanda, 17 kuve chaiyo. Yekupedzisira Apple Chitoro yakavhurwa Apple, mwedzi wapfuura, yaive muSingapore, imwe nyika uko, sekuTaiwan, vashandisi veApple vaifanira kuenda kune vanotengesa vatengesi kuti vatenge zvigadzirwa zvakagadzirwa neApple muCalifornia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Yekutanga Apple Store muTaiwan ichavhura muna Chikunguru 1
Iyo Virgin Mobile opareta katarogu inogadzirwa chete ye iPhone